June 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhegeyso Barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada
Axmad	 Jun 30, 2021 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 21-11-1442 …
Dhagayso: Shabakad Basaas ah Oo Lagu Toogtay Kuunya Barrow.
Maxkamadda ku dhaqanka Shareecada Islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose ayaa fulisay xukun xaddu riddo ah, kaasoo lagu fuliyay 8 ruux oo Jawaasiis ah. Dhamaan jawaasiistan ayaa u shaqeynayay sirdoonka dowladda…
DEG-DEG: 8 Basaas ah Oo lagu dilay Fagaare ku yaala Kuunya Barrow.
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Arbaco, Taariikhda hijriguna waxay ku…
Midowga Jaamacadaha Muqdisho Oo Cabasho ka ah Dowladda Federaalka!
Kulan magaalada Muqdisho ay ku qabteen qaar kamid ah maamulayaasha Jaamacadaha iyo macallimiinta ayay kaga hadleen dhibaato adag oo lasoo deristay. Macallimiinta iyo maamulayaasha Jaamacadaha ayaa sheegay in dowladda federaalka ay…
Dhagayso: Macluumaadka Raggii Basaaska ahaa ee lagu Toogtay Buula Fullaay.
Maxkamadda ku dhaqanka Shareecada Islaamka ee wilaayada Bay iyo Bakool ayaa fulisay xukun xaddu riddo ah kaasoo lagu fuliyay 5 ruux oo u shaqeynayay sirdoonka Maraykanka. Mid kamid ah Qudaada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa…
Howlgalladii Ugu dambeeyay ee ka dhacay Koonfurta Soomaaliya. (Dhagayso)
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay habeenkii xalay fuliyeen silsilado howlgallo ah oo lagu beegsaday ciidamada Shisheeyaha, kuwa Dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Weerarada waxay ka kala dheceen gobollada Baay,…
Dhegeyso Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada
Axmad	 Jun 29, 2021 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 20-11-1442 …
Aqoon iyo Ogaal waa barnaamij todobaadle ah oo aan kusoo gudbino macluumaad iyo xogo muhiim ah oo ku saleysan Diinta Islaamka, Caafimaadka, Juqraafiyadda iyo arimo kale, waxaana maalin kasta oo Talaado ah aad kala socon kartaan webka…
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Talaado Taariikhda hijriguna waxay ku…